Iska ilaalinta kharashaadka Dayactirka - Tenants Victoria
Waa maxay kharashaadka dayactirku?
Markaad ka guurto gurigaaga dadweynaha, Director of Housing waxaa laga yaabaa inuu ku weydiiyo inaad bixiso wixii waxyeelo ah, dayactir ama nadiifin ee guriga looga baahdo.
Lacag bixinahan ayaa adanaa loogu yeeraa kharashaadka dayactirka, kharashaadka dayactirka ee kireystaha laga rabo (MCAT), kharashaadka dayactirka guriga laga guurey ama kharashaadka masuuliyada kireystaha (TR).
Ma aha inaad bixiso kharashaadkan dayactirka inuu jiro amar ay gaadhay Victorian Civil & Administrative Tribunal (VCAT) oo kaa dooneysa inaad bixiso.
Muxuu sharcigu leeyahay
Shaciga kireystaha ee Victoria dhammaan kireystayaasha waxaa waajib ku ah inay gurigooda ay kireysteen nadiifiyaan ilaa intii macquul ah oo ay qaadaan tallaabooyin macquul ah si ay ku hubiyaan inaan guryaha waxyeelo la gaarsiin. Haddii aad fulisay waajibaadkan, VCAT waa inay go’aamisaa inaadan bixin kharashaadkan.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad jebiso mid ka mid ah waajibaadyadan Director of Housing (mulkiilahaagu) wuxuu kaa dalban karaan magdhow wixii khasaara ah ama kharashaad ee ay galaan waajibaadka aad jebisay awgii. Wixii macluumaad dheeraad ah ‘haddii Director of Housing uu ku sameeyo dalab’ xagga kale.
Sidii aad isaga ilaalin lahayd kharashaadka dayactirka
Haddii aad dooneysid inaad iska ilaalisid bixinta kharashaadka dayactirka kadib markuu dhammaado kireysigaagu waxaa jiro tiro tallaabooyin fuddud ah inaad raacdo intaad ku jirto guriga iyo markaad ka baxdo.
Intaad guriga ku jirto
Waa inaad hubisaa inaad u sheegto wixii dayactir ah ee gurigaagu u baahan yahay Director of Housing islamarka aad ogaataba. Eeg warqadayada xaqiiqda ee dayactirka guryaha Dadweynaha.
Haddii uu jiro wax waxyeelo ah oo guriga soo gaadhay waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad u sheegto Director of Housing sida ugu dhakhsaha badan.
Haddii uu u maleeyo Director of Housing inaad masuul ka tahay waxyeelada waxaa laga yaabaa inay doontaan ammar maxkamadeed oo kuu odhanaya waa inaad bixisaa dayactirka waxyeelada. Xasuuso, waxaad masuul ka noqon kartaa oo kaliya inaadan qaadan tallaabooyinkii macquulka ahaa si aad isaga ilaaliso waxyeeladaas. Tan micnaheedu waxaa weeye tusaale ahaan inaadan masuul ka ahayn waxyeelada u keenay qof gurigaaga soo jebiyey ama waxyeelada duufaanka.
Haddii aad hesho dalab dayactir Director of Housing waa inaad la xiriirtaa Tenants Union/Tenants Victoria 1800 068 860 wixii dallo ah. Tenants Union/Tenants Victoria waxay siiyaan tallo bilaash ah oo qarsoon kireystayaasha, oo ay ku jiraan kireystayaasha guryaha dadweynaha.
Markaad ka baxdo guriga
Waa inuu jiraa Warbixin Xaalladeed oo uu gurigaagu leeyahay, oo sharxa xaallada uu ahaa wakhtigii aad soo degtay. Haddii aadan heysan Warbixin Xaalladeed, weydii Xafiiskaaga Guryaha haddii ay ku siin karaan nuqul. Masuul kama noqon kartid waxyeelada ku diiwaangashaneyd Warbixinta Xaalladeed ama jirtay markii aad soo degtay.
Markaad ka guureysid gurigaaga, waa inaad nadiifisaa guriga oo aad dayactirtaa wixii waxyeelo ah oo aad u maleynaysid inaad masuul ka tahay. Ha ilaawin inaad nadiifisid jardiinka haddii aad mid leedahay. Wixii waxyeela ah waa in loo dayactiraa sida‘farsama yaqaanka oo kale’. Taas micnaheedu waxaa weeye waa in si hagaagsan loo dayactiraa iyo heerka ku haboon. Xaalladaha badidooda, nadiifiyayaal aqoon leh ama khadiifad nadiifiyayaal looma baahna si guriga loogaga tago xaallad macquul ah oo nadiif ah.
Ka hor intaadan soo celin furayaasha guriga, samee kormeerkii ugu danbeeyey si aad u hubisid in wax kasta la sameeyey. Waa fikrad wanaagsan inaad ka xaysato saaxiib ama qof kale oo kuuu noqon kara markhaati lacala haddii muran dhaco hadhow ku saabsan xaallada guriga markii aad ka baxday.
Mar haddii aad ka guurtid guriga, Director of Housing wuxuu sameyn doona kormeer. Haddii Director of Housing uu u maleynayo inaad masuul ka tahay waxyeelada ama dayactirka waa inay si kaaga dalbadaan adiga.
Haddii Director of Housing uu sameeyo dalab
Dalabka Dayactirka Director of Housing waa inuu ku jiraa faahfaahin khaas ah oo ah waxay la tahay inuu ka khaldan yahay guriga iyo kharashka lagu hagaajiyo wixii dhib ah ee jira.
Haddii aysan dalabka ku jirin dhammaan faahfaahinta ka dib waa inaad weydiisaa xafiiskaaga guryaha ee xaafada si uu kuu siiyo liis sax ah oo ku saabsan waxay kaa dalbanayaan adiga. Waa inuu jiraa dayactir ama inaam shaqo ama qaansheegad ee shaqo kasta oo la dhammeystiray.
Haddii aad hesho dalabka kharashaadka dayactirka Director of Housing aad bay muhiim u tahay inaadan is ilowsiin, xitaa haddii aadan ahayn kireystaha guryaha dadweynaha. Haddii aadan waxba sameyn, waxaa amar lagu gaadhi doona Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT) iyo waxaa deyn kugu lahaanaya Xafiiska Guryaha. Haddii aan la bixin, deyntaasi waxaa laga yaabaa inay kaa hor istaagto helitaanka guryaha dadweynaha mustaqbalka.
Haddii aadan hubin haddii aad masuul ka tahay iyo in kale kharashaadka, waa inaad tallo ka heshaa Tenants Union/Tenants Victoria 1800 068 860.
Haddii aad rumeysan tahay inaadan masuul ka ahayn qaar ama dhammaan waxa lagugu soo dalacayo, waa inaad iskudaydaa inaad kala xaajooto Director of Housing. Waxaa laga yaabaa inaad wada gaadhaan heshiis aad ku bixineyso caddad ka yar ama aad u bixineyso qaybqaby. Ha ogolaanin inaad bixiso kharashaad haddii aadan rumeysneyn inaad jebisay waajibaadkaaga kireyste ahaan.
Director of Housing wuxuu ka dalban doona magdhow VCAT.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee waraaqaha xaqiiqda Defending Compensation Claim iyo The Victorian Civil & Administrative Tribunal.
Xasuuso, waxba kaaga lumimaayaan haddii aad VCAT aado si aad u difaacdo dalabka kharashaadka dayactirka. Kireystayaasha difaaca dalabka magdhowga badanaa iyagaa ku guulaysta.
Avoiding public housing maintenance charges | Somali | June 2012